Qaar kamid ah Midowga Musharixiinta oo ku wajahan Magaalada Garoowe - Awdinle Online
Qaar kamid ah Midowga Musharixiinta oo ku wajahan Magaalada Garoowe
Saacadaha soo socda ee Maanta ah ayaa waxaa la filayaa in qaar kamid ah Madaxda Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya inay tagaan Magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal.
Musharax Madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle ayaa hoggaamin doona Musharixiinta, kuwaas oo la sheegay inay laba ujeedo u tegi doonaan magaalada Garoowe.
Wararka la helay ayaa waxaa ay sheegayaan in Midowga Musharixiinta Madaxweynaha ay Garoowe kaga qeyb-geli doonaan Shirweyne u dhaxeeya Madaxda Dowladda & Dowlad goboleedyada, kaas oo looga hadlayo xalka gaarusta khilaafka ka taagan doorashada.
Sidoo kale Midowga Musharixiinta ayaa waxaa ay Magaalada Garoowe iyo degaannada kale ee Puntland waxaa ay ka sameyn doonaan kulamo la xiriira ololahooda doorashada, iyaga oo sidoo kale ka qeyb-geli doona Barnaamijyo dooda ah oo halkaasi ka dhacaya.
Musharax Madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle ayaa sirasmi ah u sheegay booqashada ay Maanta ku tegayaan Magaalada garoowe, iyada oo halkaasi siweyn looga dareemayo qaban qaabada soo dhawyyntooda.
“Waxaan ku wajahanahay magaalada Garoowe. Muddada aan joogo waxaan la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana ka qaybgali doonaa dood cilmiyeedyo iyo barnaamijyo kale oo aan aragtidayda siyaasadeed ku soo bandhigaayo. Waxaa iga go’an inti suuragal ah in aan qof walba oo Soomaali ah rugtiisa ku gaaro ayuu yiri” Daahir Geelle.
Kulanka ka furmaya Magaalada Garoowe ayaa waxaa sidoo kale ka qyeb-geli doona Ururada Bulshada rayidka, kuwaas oo doorweyn ku yeelan doona xalinta khilaafka ka dhashay Arrimaha doorashooyinka Soomaaliya.
Ammaanka Magaalada Garoowe ayaa aad loo adkeeyay, waxaana Shacabka Soomaaliyeed & Beesha Caalamka ay isha ku hayaan shirweynaha Garoowe uga furmaya Madaxda Dowladda, Dowlad goboleedyada & Midowga Musharixiinta.
Previous articleWiil Dhalinyaro ahaa oo lagu dilay Muqdisho & faah faahin kasoo baxeysa
Next articleXukuumadda Soomaaliya oo beenisay War kasoo yeeray Xasan Cali Kheyre